किताब अभियानलाई सरकारको सहयोग | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा किताब अभियानलाई सरकारको सहयोग
वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशका जिल्ला कारागारलाई पुस्तकालय निर्माणका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेका छन् । कारागारलाई किताब अभियानमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोगस्वरूप पुस्तक तथा फर्निचर हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले रू. ४ लाख ९९ हजार ३३८ बराबरको १७ सय ५० थान पुस्तक हस्तान्तरण गरेको छ । त्यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले रू. १ लाखबराबरको टेबुल, कुर्सी र दराज हस्तान्तरण गरेको हो । पञ्चपुरी नगरपालिकाले रू. ५० हजार २२५ बराबरको ३ सय ७८ थान पुस्तक, वराहताल गाउँपालिकाले रू. ३९ हजार ८८० को १३० थान पुस्तक, लेकबेँशी नगरपालिकाले रू. ३० हजार १३० बराबरको १९९ थान पुस्तक सहयोग गरेका छन् ।
त्यसैगरी अभियानका लागि भेरीगंगा नगरपालिकाले रू. ३० हजारबराबरको तीन थान दराज, गुर्भाकोट नगरपालिकाले रू. ३९ हजार ८४४ बराबरको ११६ थान पुस्तक, चौकुने गाउँपालिकाले रू. ४९ हजार ९५४ बराबरको १५१ थान पुस्तक हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले हालसम्म कारागारलाई किताब अभियानका लागि रू. ८ लाख ३९ हजार ३३५ बराबरको २ हजार ७२४ पुस्तक हस्तान्तरण गरेका छन् ।
सबै क्षेत्रबाट गरी हालसम्म कारागारलाई किताब अभियानका लागि रू. २७ लाखबराबरको पुस्तक सहयोग प्राप्त भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा अभियानका संयोजक डीआईजी महेशविक्रम शाहले जानकारी दिए । उनले यो अभियान सफल बनाउन कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तह तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोग मिलेको बताए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले कर्णालीमा नवीन कामको थालनी भएकाले यसले कैदीबन्दीको मानसिकतालाई परिवर्तन गर्ने बताए । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव मानबहादुर बीकेले देशकै नमूना काम कर्णालीबाट भएको उल्लेख गरे ।